आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (११ जेठ २०७७ आइतबार, २४ मई २०२०) – Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (११ जेठ २०७७ आइतबार, २४ मई २०२०)
घटना र विचार, न्युज डेस्क !3days ago May 24, 2020
ग्रीष्म ऋतु श्रीशाके १९४२ नेपाल संम्वत् ११४० वि.सं. २०७७ ज्येष्ठ ११ गते आइतबार तद्अनसार सन् २०२० मई २४ तारिख ज्येष्ठ शुक्लपक्षको द्वितीया तिथि मृगशीरा नक्षत्र सुकर्म योग ३ः४५ पर धृति योग बालब करण आनन्दादिमा सौम्य योग चन्द्रमा वृष राशिमा १७ः२३ बजेसम्म त्यसपछि मिथुन राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ५ः१३ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १८ः५० मा हुनेछ । चन्द्रोदय, द्विपुष्कर योग २४ः१९ बजेसम्म ।
मेष – बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । सभा–समारोहमा मान–पुरस्कार प्राप्त हुनेछ । आरोग्यता बढ्ला । विकासको नयाँ सम्भावना देखा पर्ला । आशा उत्साह बढ्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्ला । मनोकुलको काममा सफलता मिल्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । लगानी उठ्नेछ । पारिवारिक सुख शान्ति बढ्नेछ । साथीभाइको साथ मिल्नेछ । ऐश्वर्य बढ्ला । अन्नधन वृद्धि हुनेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ । सन्तान सुख पाइनेछ । प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्नेछ । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । सुख शान्ति बढ्नेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । विजयश्री मिल्नेछ । रोकिएको काम बन्नेछ । नयाँ काममा पनि सफलता मिल्नेछ । मान महत्त्व बढ्ला ।
मिथुन – मिठो भोजन प्राप्त होला । शुभ काममा आकर्षण बढ्नेछ । यात्रा हुने र सुख समृद्धि बढ्ने सम्भावना रहनेछ । आरोग्यता बढ्ला । आयात–निर्यातसित सम्बन्धित काम बन्ला । लेखन–प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्ला । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा आँट उत्साहमा बढोत्तरी हुनेछ । घरपरिवारको स्थिति सुखद रहला । मान प्रसिद्धि बढ्नेछ ।
सिंह – आयवर्द्धक कार्य बन्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । हाकिमको साथ प्राप्त होला । आर्थिक र बौद्धिक प्रगति होला । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ला । सभा–समारोहमा मान पुरस्कार भेट्नेछ । घरेलु चिन्ताको समाधान पनि मिल्नेछ । मनमा सन्तुष्टि होला । आयवर्द्धक काम बन्ला । विजयश्री मिल्नेछ । साहसिक काम बन्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । सुख सुविधा बढ्नेछ ।
वृश्चिक – रोकिएको काम बन्ला । नयाँ काममा उत्साहजनक सफलता मिल्नेछ । व्यस्तता बढ्नेछ । समयबाट बढी फाइदा लिनु हितकर रहला । राजकाजमा सफलता मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । विवाद आदिमा नपर्नु हितकर रहला । अरुको भर नपर्नु बेस होला ।
धनु – समयले साथ दिनेछ । कार्य क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । यश वर्चश्व वृद्धि हुनेछ । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । पारिवारीक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । श्रेष्ठ व्यक्तिको साथ मिल्नेछ । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने क्षमता बढ्ला । नयाँ दायित्व पाउनुहुनेछ । मनोकूलको काम बन्नेछ । आँट उत्साह बढ्ला । मान पुरस्कार मिल्नेछ ।
मकर – साहसिक काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । इष्टमित्र सन्तानसुख मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछ । सफलता मिल्नेछ । शुभ समाचार मिल्नेछ । मान महत्व बढ्ला । सुख आनन्दमा वृद्धि हुनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्नको प्रभाव बलियो बन्नेछ । धन सम्पत्ति पद महत्व बढ्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लडने सामर्थ्य बढ्नेछ ।
कुम्भ – खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । आरोग्यता बढ्नुको साथै आर्थिक कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । आंट उत्साह बढ्ला । सुख समृद्धि बढ्ला । लोभ लालच इर्ष्या–द्वेषमा नियन्त्रण राख्नुपर्ला । कार्यव्यपारको क्षेत्रमा पनि सफल हुनुहुनेछ । अरुप्रति बढि भर पर्नु उचित हुने छैन । रसरागमा आकर्षण वृद्धि होला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । आफन्तको सहयोगमा कमी आउने छैन ।